Indlu encane phezu kwentambo - I-Airbnb
Indlu encane phezu kwentambo
Neustadt am Rübenberge, Niedersachsen, i-Germany
Ikamelo e-indlu encane ibungazwe ngu-Sylvia
U-Sylvia Ungumbungazi ovelele
Endlini yethu Encane babingelela izinkomo ekuseni futhi ngenkathi udla isidlo sasekuseni ungakwazi ukujabulela ukubuka okubanzi kwamadlelo aluhlaza. Indlu yokugezela (indlu yangasese & usinki & ishawa encane) ingasetshenziswa egcekeni. Imayelana ne-100m ukusuka endlini encane.
Ilungele abagwedli nabahamba ngamabhayisikili.
Ukudla kwasekuseni (8 € / P) kungabhukwa ngaphezu kwalokho. Isihlalo esinesitsha somlilo sitholakala eduze kwe-TinyHouse. Lapha useduze kakhulu nemvelo kanye nesibhakabhaka esinezinkanyezi :-)
I-TinyHouse inegumbi elilodwa (2.5x6m). Umbhede ucishe ube ngu-1.40 m ububanzi. Umbhede wokuhamba ungengezwa. I-TinyHouse imi yodwa ethafeni elingemuva kwegceke. Indlu yokugezela ibuye isetshenziswe abasebenzi phakathi nosuku - yizivakashi zase-TinyHouse kuphela kusihlwa.
Indawo ikude nomgwaqo wezwe, eduze nemvelo, ngqo ku-Leine kanye nendlela yomjikelezo we-Leine-Heide.
Edolobhaneni elingumakhelwane laseMandelsloh kunezitolo zokudla / amakhemisi kanye nedamu lemvelo elingaphandle.
I-Mühlenfelder Land, i-Serengeti Park, i-Steinhuder Meer kanye ne-Landestrost Castle e-Neustadt am Rübenberge yizibonelo ezimbalwa kule ndawo.
I-Tiny House ihloselwe ukuziphekela wena. Sihlala kwamakhelwane futhi siyakujabulela ukusiza kunoma yiziphi izinkinga.
Hlola ezinye izinketho ezise- Neustadt am Rübenberge namaphethelo